Maamulka Gal-mudug iyo Hay’ado Ka Shiray Nadiifinta Wadooyin Ay Biyo Wasaqeysan Fadhiyaan – Goobjoog News
Magaalada Gaalkacyo ee gobalka Mudug waxaa maanta ka dhacay kullan ballaaran oo looga arinsanayay sidii magaaladaasi looga saari lahaa biyaha wasaqeysan ee dhex yaalla xaafadaha Gaalkacyo.
Kulankaan waxaa isugu yimid qaar ka mid ah hay’adaha ku sugan magaalada Gaalkacyo, xildhibaanno ka mid ah Gal-mudug, ururada bulshada iyo mas’uuliyiin kale.
Kulankaan ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay Bile Diini Cali oo ah gudoomiyaha magaalada Gaalkacyo ee Gal-mudug, waxaana uu sharaxaad ka bixiyay waxyaabihii laga wada hadlay.
Waxa uu tilmaamay in ay la kulmeen 14-hay’adood, oo uu sheegay in ay isla garteen arimo ay ka mid tahay, in marka hore biyaha magaalada laga saaro, in caro buuxin lagu sameeyo meelaha biyuhu fariistaan, sidoo kalena lagu shubo Kaloriin, waqtiga fogna la sameeyo Kanaalo ay biyuhu maraan.
Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale ugu baaqay hay’adaha ka shaqeeya magaalada Gaalkacyo in ay wax u qabtaan dadka degan kaamamka ku yaalla magaalada Gaalkacyo oo degan guryo cooshado ka sameysan, kuwaasi oo saameyn ku reebay roobabkii ka da’ay magaaladaasi.
Magaalada Gaalkacyo waxaa dhex ceegaaga biyo badan oo wasaqeysan, kuwaasi oo laga baqayo in caafimaad darro ay halkaasi ka dhalato.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Oo Maanta Xukun Dil Ah Ka Fulisay Magaalada Baydhaba
Maamulka Gal-mudug Oo Ku Baaqay u Gurmashada Soomaalida Kasoo Cararay Dalka Yemen
Dhuusamareeb: Dhismayaasha Sharci Darada Oo La Burburinayo